Antenimiera roa tonta : misy ny volavolan-dalàna ny amin’ny politika momba ny teny - ewa.mg
News - Antenimiera roa tonta : misy ny volavolan-dalàna ny amin’ny politika momba ny teny
“Ny toe-tsaina mihitsy no ilàna
ny politika momba ny teny. Efa niakatra teny amin’ny
Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona izahay eto amin’ny
Akademia. Ary efa eo am-pelatanan’ny filoha nifandimby teo ny
politika momba ny teny amin’izao fotoana izao” hoy ny tale
jeneralin’ny Foibe momba ny teny eny anivon’ny Akademim-pirenena,
Rasoloarimalala Randriamamonjy Esther, momba ny volavolan-dalàna ny
amin’ny politika momba ny teny izay efa napetraka eny amin’ny
Antenimiera roa tonta.
“Tsy mora io tsy akory”,
hoy izy. Tsy hoe hametrahana didy iray dia tsy maintsy miteny
malagasy avokoa ny rehetra, na tsy maintsy atao amin’ny teny
malagasy avokoa ny rehetra. Sarotra io satria 25 tapitrisa isika
ankehitriny. Andrasana ny valin-teny hisian’ny fanantenana indray
Mbola tsy tena mahaleo tena
Takina hatrany ny politika momba ny
teny. Tokony horesahina mialoha ny firafitry ny teny. Ny firafitry
ny toe-tsain’ny Malagasy manerana ny Nosy no anisan’ny lehibe ao
anatiny. “Revorevon’ny hoe azo ny Fahaleovantena isika, fa
mbola tsy tena mahaleo tena raha tsy mivoaka io didy
io”, hoy ihany izy.
Ny manahirana ny olona
an-drenivohitra, indrindra ny any ambanivohitra, miady tany, miady
lova: tena very rehefa miditra fitsarana. Tena manahirana ny teny
frantsay ampiasaina amin’izany. Efa nahavita rakibolana momba ny
fitsarana ny eo anivon’ny Tahala Rarihasina amin’ny foibe momba ny
teny ao amin’ny Akademiam-pirenena. Saingy sarotra ny mamoaka boky
haparitaka. Nefa efa misy ezaka sy dingana lavabe efa vita.
Izany rehetra izany, araka ny
fanazavany, ho an’ny olona maka vadintany na miresaka amin’ny
mpisolovava na ny mpiara-miasa any amin’ny fitsarana: samy
nampitaina avokoa fa mba hatao amin’ny teny malagasy fa tsy
fantatry ny maro manana ady eny amin’ny fitsarana. Tokony hisy
fiaraha-miasa eo amin’ny fitsarana sy ny Akademiam-pirenena ny
L’article Antenimiera roa tonta : misy ny volavolan-dalàna ny amin’ny politika momba ny teny a été récupéré chez Newsmada.
Banky SG Madagasikara: tolotra tsy asiana sarany
Ho an’ny banky Société générale (SG) Madagasikara, fotoana firoboroboan’ny toekarena ny volana jona. Hoentina hanohanana izany vanim-potoana izany ny fanomezana tolotra manokana tsy asiana sarany ho an’ny fanokafana kaonty vaovao sady miaraka amin’ny tolotra samihafa, sahaza ny tsirairay.Nanomboka ny tapaky ny jona teo ity tolotra vaovao ity ary manan-kery hatramin’ny 31 aogositra 2019. Maimaimpoana ny fahazoana ny tolotra (pack) Mandrosoa, ny Mandrosoa plus sy ny Akaiky, mandritra ny enim-bolana voalohany. Ahena tarehimarika efatra (4 points) koa ny fampindramam-bola Soafeno (lasa 16%). Omena karatra banky Poinsettia na Varongy Visa, ahafahana misintona na mandoa vola. Eo koa ny fitahirizam-bola Soafiandry, ny Messalia hijerena ny kaontim-bola amin’ny finday. Afaka mampiasa ny Mvola amin’ny pack Akaiky, famindram-bola amin’ny banky harotsaka ao amin’ny Mvola.Ho an’ireo mpandeha lavitra, azo atao ny mandoa na misintom-bola amin’ny Packs Eben Or amin’ny alalan’ny Visa Gold. Mampiasa ny 3D Secure amin’ny internet, tsy milahatra rehefa eny amin’ny masoivohon’ny SG Madagasikara rehetra, sns.Njaka A.L’article Banky SG Madagasikara: tolotra tsy asiana sarany a été récupéré chez Newsmada.
Tanjombato: sesilany ny asan-jiolahy, telo lahy saron’ny polisy
Saron’ny polisy ao amin’ny kaomisarian’i Tanjombato, omaly maraina, ny telo tamin’ireo jiolahy tompon’antoka tamina fanafihana mitam-piadiana nisesy amin’iny faritra Tanjombato hatrany Andoharanofotsy iny. Maro ireo olona mitaraina amin’ny afitsok’ireo jiolahy, saika ho isan’andro izany, araka ny fijoroana nataon’ireo olona lasibatra. Raha ny loharanom-baovao voaray, nanomboka ny talata hatramin’ny alakamisy teo, nisy asan-jiolahy mitam-piadiana niseho tao Belambanana Andoharanofotsy. Tsy vitan’izay fa ankoatra ny fandrobana, mbola nisy vehivavy iray voaolana mihitsy aza nandritra izany. Nitohy ny zoma indray izany tao Ankadilalampotsy, kaominina Tanjombato, nitrangana fanafihan-jiolahy mitam-piadiana koa tao an-toerana. Tokantrano iray notafihin’ny jiolahy, saingy tsy tontosan’ireo jiolahy hatramin’ny farany anefa ity fanafihana ity satria henon’ny tompon-trano. Nandeha ny fanadihadiana rehetra taorian’izay. Omaly tamin’ny 8 ora sy 30 mn maraina, nisy nahatsikaritra teo an-tanàna ihany ireo jiolahy tompon’antoka tamin’ity fanafihana ity. Niantsoana polisy avy hatrany izy ireo ka noraisim-potsiny. Ao anatin’ny fanadihadiana ny polisy satria mbola tsy fantatra na iray ihany na samihafa ireto jiolahy ireto.J.CL’article Tanjombato: sesilany ny asan-jiolahy, telo lahy saron’ny polisy a été récupéré chez Newsmada.
Nolavin-dRandriamamy Mathyas, mpiandry tsatobin’ny Paris St Germain, ny fiantsoan’ny mpanazatran’i Frantsa azy, handrafitra ny ekipam-pirenena frantsay, sokajy U20. Nambarany fa ny hilalao ao amin’ny Barea de Madagascar no tiany ary hiaro ny voninahi-pirenena, amin’ny fihaonana rehetra ho avy. Tompondaka L’article Barea de Madagascar a été récupéré chez Newsmada.
Mivoy ny gadona Batrelaka: dimy taona nanehoana ny talentany i Jacky Askany
Zanak’i Farafangana… Jacky Askany, mivoy ny Batrelaka, araka ny gadona any amin’ny faritra niaviany. Dimy taona nilomana teo amin’ny tontolon’ny mozika ny tenany, ankehitriny. Tao anatin’izay, nanomana hira vaovao foana ho an’ny mpankafy azy izy. Maro ny seho nanehoany ny talentany raha tsy hilaza afa-tsy ny “cabaret” matetika tao amin’ny Hôtel Le Glacier Analakely, ny fampisehoana tany Atsimo Atsinanana, indrindra ny tao Farafangana. Anisan’ny hira tena nahafantaran’ny maro an’i Jacky Askany ny “Ino gne ratsy “. « Tena miroborobo tsy misy ohatra izany ny mpihira, ankehitriny. Misy foana ny hira vaovao mivoaka na ny « nouveauté » heno sy hita amin’ny haino aman-jery isan-karazany. Indraindray anefa tsy hay ny tena manavaka ny sasany amin’ny hafa. Mila manana ny mampiavaka anao amin’ny hafa hatrany anefa ianao , ary izay no maha artista, na ilay famoronana tsy manampaharoa. Izany no mahatonga an’ireny mpihira taloha ireny tsy lefy laza hatramin’izao satria tena nahay nitrandraka ny maha izy azy izy ireo”, hoy i Jacky Askany, nanazava ny fomba fahitany ny mozika ankehitriny.Marihina fa misy 30 eo ho eo ny hirany ary 14 ny rindrantsary na “clip”hatramin’ny “lyrics” izay natao, araka ny nambarany. Ny zandriny lahy, i Jackot no manampy feo azy rehefa manao fampisehoana izy. Maka mpitendry manokana kosa rehefa misy hetsika fa tsy manana mpitendry raikitra i Jacky Askany. Ny ho lasa lavitra eo amin’ny tontolon’ny mozika malagasy no fanirian’ny lehilahy ary hanandratra ny kanto malagasy manerana izao tontolo izao. Tarigetrany ny hampahafantatra an’i Magasikara amin’ny alalan’ny mozika ataony .NarilalaL’article Mivoy ny gadona Batrelaka: dimy taona nanehoana ny talentany i Jacky Askany a été récupéré chez Newsmada.
Nozarain’ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, i Sahondrarimalala Marie Michelle fanafody ho enti-miady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid -19 ny mpiasa rehetra eto anivon’ny minisitera iadidiany, omaly. CVO, Magnésium-B6, vitamine C sy arotava no nozaraina. Nambarany fa ilaina ny fandraisana andraikitra sy fanajana ireo fepetra hoentina miady amin’ny valanaretina. Nisy ny fitiliana natao tamin’ny zoma lasa teo ho an’ny mpiasa ary mbola hitohy izany.Notokanana, omaly, ny efitranon-tsekoly roa vaovao etsy amin’ny EPP Antohomadinika. Fiaraha-miasa amin’ny masoivoho frantsay no nahafahana nanao izany trano izany. Tanjona ny hanamaivana ny isan’ny mpianatra raisina amina efitranon-tsekoly iray, indrindra amin’izao fihanaky valanaretina covid-19 izao. Nahafahana nanavao ny kojakoja enti-mampianatra sy ny fitaovana tao an-tsekoly ihany koa ny tohana avy amin’ny masoivoho frantsay. L’article Indray mijery a été récupéré chez Newsmada.